Imibuzo ngengqungquthela yeFrance ne-Afrika - Bayede News
Nanamuhla usasithwele isicoco sokuba ngumkhulumeli wabantu
Umhlangano obubizwe nguMengameli waseFrance uMnu uMacron nawethe ngokuthi yiFrance-Africa Summit, nobanjelwe edolobheni iMontpellier elikulelizwe mhla ziyisi-8 kwephezulu udonse amehlo abaningi ngendlela abewuhlele ngayo. Mhlazane uMakron edalula ukuthi uzobamba lomhlangano wathi inhloso yawo “ukunika ithuba lokuthi abasha base-Afrika nabaseFrance, nsuku zonke abakha ikusasa lobudlelwano beFrance kanye ne-Afrika, babambe iqhaza ngokuthi bacubungule ndawonye amathuba okuqinisa nokuvuselela lobudlelwano”.
Lesi sinqumo sikaMacron sokuhlela lo mhlangano singabhekwa ngezindlela ezimbili ezahlukene. Eyokuqala kungaba ukuthatha lesinqumo ngesikhombisa ukuthi uMacron akadeleli uqhuba intwala ngewisa ngokuthi ethe lo mhlangano ngokuthi yiFrance-Africa Summit kepha athi angeke ameme oMengameli nabaholi bamazwe ase Afrika, kunalokho lomhlangano uzohanjelwa izakhamuzi azihlonzile, abacwaningi abehlukene, nabantu abaqavile kwimikhakha eyahlukene kepha abangaveli koHulumeni.
Le France–Africa Summit, uthe ubeyibizele ukuze uHulumeni wakhe udinginde kabazi ngokuningi nokubalulekile okumele kwenzeke emikhakheni eyahlukene ikakhulukazi eyokubhekelela intsha yase Africa. Okuxakayo ke, nokungenza kube khona abathi uqhuba intwala ngewisa ukuthi, angabiza kanjani umhlangano ozodingida izindaba ezifaka izinhlaka zoHulumeni, ziphinde zibe yingxenye yezivumelwano ezithile noHulumeni, kepha aphinde athi abamenyiwe bona kulo Mhlangano.
Ngaleyondlela, angeke sibasole abangathi lo mhlangano ubuyi‘tulo’ likaMacron lokudala izinkinga phakathi koHulumeni kanye nezakhamuzi zamazwe ase-Afrika ebezihambele lomhlangano. Lokumusola okaMakron ukuthi lomhlangano ubuyitulo elifana naleli, kuvela ngokuthi zikhona izihambeli zalo mhlangano ezikhalaze ngokuthi zihlala futhi zibuya emazweni lapho ziphethwe ngendluzula nangendlela engenayo idemokrasi. Ngamanye amazwi, iFrance izibeka esimweni lapho izokwazi ukuqala imikhankaso yokuthi ezweni elithize nelithize kumele kudlondlobaliswe eyedemokhrasi.
Okungaphinde kwenze lesi sinqumo sikaMacron sithathwe njengesikhombisa indelelo wukuthi, kuwo lonyaka wabiza inggungquthela naye eyaziwa njengeFrance-Africa Summit, lapho ahlangana khona noMengameli bamazwe ase-Afrika. Umbuzo ovelayo ngothi yini aseyenzile nebambekayo ngezincomo nezivumelwano zale Ngqungquthela, njengoba esentintinize wabiza enye nezakhamuzi zase-Afrika.
Kepha ngakolunye uhlangothi bangeke basolwe abangathatha lesi sinqumo sikaMacron ngesingeyona inkinga ngoba ayikho emvimbayo ekutheni ahlangane nanoma wubani noma yiziphi izinhlaka ezikhona emazweni ehlukene.
Uma sithathwa ngalendlela, lesinqumo kungaba ngesigcizelela imibono eminingi ekhona ethi kulesi sikhathi samanje elaseFrance lizithola likwingcindezi kubudlelwano elalinabo namazwe ase-Afrika ikakhulukazi lawo ayengamakoloni ayo. Le ngcindezi ivela ngoba amazwe anjengeRussia, kanye neChina awazibekile phansi ekudlondlobaliseni ubudlelwane nawase-Afrika abethathwa ngasondelene kakhulu nelaseFrance. Ngaleyo ndlela, itulo lokubiza ingqungquthela yezakhamuzi ihlose ukwakha ubudlelwane beFrance nezinhlaka ezahlukene kula mazwe, ngaleyo ndlela kuvuseleleke noma kuqiniswe ukuxhumana phakathi kwayo nala mazwe.
Izinsika zenhlonipho zagululwa yini
Imibiko esivelile ngale Ngqungquthela kubonakala sengathi le nhloso yokwakha noma ukuvuselela lobudlelwano ifezekile ngoba uMacron uqhamuke nezincomo ezithile ngezokwenza iFrance ukuze yeseke intsha yase-Afrika kwizingqinamba ezithize ebhekene nazo.
Ngakolunye uhlangothi, iyavela imibiko ethi abahambeli balo mhlangano bakhalaze ngokuningi iFrance eyehlulekayo ukukwenza noma yabe ithembisile ukuthi izokulungisa. Isibonelo, kuyavela ukuthi abanye babahambeli bale Ngqungquthela bakhalaze ngokwehluleka kweFrance ukubuyisela ezwenikazi amafagugu asabalele ezigcini magugu abaweba ngesikhathi amazwe athize engamakoloni ayo.
Lokhu kuphoqe uMakron ukuba adalule kuyo leNgqungquthela ukuthi angeke uphele lonyaka izithombe ezibaziwe zedumela zaseBenin zingazange zibuyiselwe. Akaqali uMacron ukuzibophezela ngokubuyisela lokho okungamafagugu ase-Afrika, ngoba sekuphele iminyaka eyevile kwemi-3 enza isithembiso esifana nalesi kodwa kuze kube manje ubengakasifezi. Kepha, uma inhloso yakhe kungukuvikela ududlelwano namazwe athize ase-Afrika kuzomphoqa ukuba asifeze lesi sethembiso asenzile ngokwaseBenin. Kulokhu, sizoyicela ivuthiwe.
Okusayindinda okwamanje ukuthi kungabe uMacron usehlose ukubamba izingqungquthela ezimbili nezahlukene namazwe ase-Afrika noma cha? Noma kunjalo, kuzomele ukuthi abaholi bamazwe ase-Afrika bayifakele izibuko eyaleFrance-Africa Summit yangamuva ukuze ingagcini isiba yishashalazi elidingida izindaba okumele kubhekanwe nazo ezingeni loHulumeni. Uma lokhu bengakwenzi kuzokwandisa amathuba okuthi behluleke ukuqhuba imizamo ekhona yokuqinisa imigudu ekhona nesemthethweni yokubuyekeza ukuthi izibophezelo ezikhona phakathi kwe France namazwe athize e-Afrika zifezeke.
nguSenzo Ngubane Oct 15, 2021